ကုန်ကြမ်းလုပ် SA 47 (792236-07-8) ပေးသွင်းhplc≥98% | AASraw
အချို့စာမျက်နှာများကိုဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုထားသောသူတို့အလုံအလောက်တိကျမှုမရဖြစ်ကြ၏ဘို့, စစျဆေးဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ အဂၤလိပ္ ပိုကောင်းတဲ့အသေးစိတ်ရူပါရုံကို။
/ထုတ်ကုန်များ /အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်/ SA 47
rating: အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် Tags: SA 47 ဝယ်ဖို့, SA 47, ရောင်းရန်လုပ် SA 47, SA 47 ပေးသွင်း
SA 47 အရှုံးအလေးချိန်ကို အသုံးပြု. များအတွက်ရွေးချယ် FAAH inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ AASraw, ရောင်းရန်ရှိသည် 99% SA 47 အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများအသုံးပြုသည်ထက်မနည်းသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် .. ကျနော်တို့လုပ် SA 47 ပေးသွင်းများမှာလုပ် SA 47 ပေးပါသည် ..
SA 47 ကဗီဒီယို
I.SA 47 အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: SA 47
ပျော်ဝင် 100 MM 1eq မှ DMSO ။ HCl 50 MM မှ MM အီသနော 50 မှ
II ကို။ သံသရာထဲမှာ SA 47 အသုံးပြုမှု:
SA 47 အမှုန့်
2.SA 47 အသုံးပြုမှု:
88 တစ်ထိုးတဦးတည်းမူးယစ်ဆေးဘို့ / ကီလိုဂရမ် MG အဘို့, ကြွက်များအတွက်ဆေးထိုးပြောင်းလဲခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်: 88 / ကြွက်ကီလိုမီတာကိန်း (3) က mouse ကိုကီလိုမီတာကိန်း (6) နှင့်သွေးခွဲခြင်းဖြင့် 44 မီလီဂရမ်တစ်ခုညီမျှထိုး / ကီလိုဂရမ် MG များပြား ကြွက်အဘို့အကီလိုဂရမ်ရယူခဲ့ပါတယ်။
SA3အပေါ် 47.Warning
5 ။ SA 47:
6 ။ SA 47 ချက်ပြုတ်နည်း:
7 ။ SA 47 စျေးကွက်:
III ကို။ SA 47 HNMR
IV ။ AASraw ထံမှလုပ် SA 47 ဝယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အမျိုးသမီး Viagra? အဆိုပါလိင် Enhancer Flibanserin အမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကို အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Clenbuterol သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို / nandrolone အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတွက်အသုံးပြု nandrolone အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
ကျနော်တို့ပုံမှန်အား 8 နာရီအတွင်းတုံ့ပြန်ကြသည်။
လုံးဝအခမဲ့ reship နှင့်အချို့သောနိုင်ငံများအတွက်ကျနော်တို့ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိရန်သင့်အားအာမခံပါသည်။
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ အီးမေးလ်က , ကျနော်တို့သာမန်အားဖြင့် 8 နာရီအတွင်းတုံ့ပြန်ကြသည်။
1 ထဲကနှုန်းကို52 ထဲကနှုန်းကို53 ထဲကနှုန်းကို54 ထဲကနှုန်းကို55 ထဲကနှုန်းကို 5
"လုပ် SA 47" ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
Bupropion HCL အမှုန့်
Nootropics အမှုန့် (17)
R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း (33)
Nandrolone အမှုန့်စီးရီး (10)
testosterone အမှုန့်စီးရီး (14)
စက်ရုံ Extract (1)
အဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ Lorcaserin သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
02 / 18 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က9
10 / 29 / 2017 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က9
အွန်လိုင်းမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်: သင်သင့်ပါတယ်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိရန် !!!
03 / 06 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က6
01 / 27 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က4
11 / 19 / 2017 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က4
07 / 18 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က0
တား JZL-184 (1101854-58-3) ပေးသွင်းမှသည်အများစုကအပြီးအစီးရှင်းလင်းချက်
07 / 17 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က0
Anti-inflammatory ဟော်မုန်း PGE70 နှင့် PGE2-G တားစီး WWL2
07 / 16 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က0
IDFP (615250-02-7): အကျိုးသက်ရောက်မှု, သောက်သုံးသော, ပြန်သုံးသပ်ချက်များ
07 / 15 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က1
Levonorgestrel: ကအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်လိုအသုံးပြုမှု, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
07 / 12 / 2018 ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က0
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က on အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Dianabol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?
J ကို Burke on အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Dianabol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?
mereupregatit on IDFP (615250-02-7): အကျိုးသက်ရောက်မှု, သောက်သုံးသော, ပြန်သုံးသပ်ချက်များ
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က on အဘယ်မှာရှိအွန်လိုင်း yohimbine အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?
Vagelis on ကာယဗလများအတွက် Stanozolol အမှုန့်: သင်သိသင့် 16 အချက်အလက်များ !!!